Xadgudubyada ka dhanka ah dumarka oo laga hadlay – Radio Muqdisho
Xadgudubyada ka dhanka ah dumarka oo laga hadlay
Wasiirka Haweenka iyo xuquuqul Insaanka Xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta kulan la yeelatay guddigga Xuquuqul Insaanka ee Baarlamaanka Soomaaliya, iyagaoo ka wadahadlay ilaalinta xuquuqda Haweenka.
Kulan ayaa intii uu socday waxaa looga dooday sidii looga dhiidhin lahaa xadgudubyada ka dhanka ah haweenka iyo sidoo kale in baaritaanno lagu sameeyo xadgudubyada loo geystay haweenka.
Guddoomiyaha guddiga xaquul insaanka ee Baaarlamaanka Soomaaliya Maryan Aweys Jaamac oo kulanka kaddib la hadashay Warbaahinta Qaranka ayaa sheegtay in kulanka maanta ay isla soo hadal qaadeen arrimo badan oo ku saabsan xadgudubyada lagula kaco dumarka iyo in Wasaaradda ay warbixin cad ka soo saarto eedeymihii loo jeediyay ciidanka AMISOM ee ahaa kufsi.
“Waxaan ka wada hadalnay in la dabagalo warbixintii ku saabsaneyd kufsigii lagu eedeeyay ciidanka AMISOM, in arrintaasi baaritaanno dheeraad ah lagu sameeyo, si loo muujiyo doorka xukuumadda uga aadan falalka ka dhanka ah dumarka ee lagu eedeeyay ciidanka AMISOM, si shacabka ay u helaan jawaab waafi ah” ayay tiri Maryan Aweys.
Wasiirka Wasaaradda haweenka iyo horumarinta xaquuqda Aadanaha ee Xukuumadda Soomaliya Sahra Maxamed Cali Samatar ayaa sheegtay in Wasaaraddu ay qaadan doonto doorka uga aadan eedeymaha ku aadan in ciidanka AMISOM ay haween kufsadeen.
“Waxan balan qaadayaa in aan gacan ka geysto sidii arrintaasi aan u baari lahayn oo aan u soo saarno eedeymaha la sheegayo, waxaana deeq bixiyaasha ka codsaneynaa in askar ku kacday facilada lagu eedeynayo, waxaana rajeynaa in aan si sax ah u soo saarno” ayay tiri Wasiirka Haweenka.
Sidoo kale Wasiirka Wasaaradda Haweenka ayaa tiri “Anaga waxaan nahay Ummad Muslim ah, kufsi ma qaadan karno, dumarka Soomaaliyeed ma ogolin in xad gudub lagu sameeyo, waxaan u balan qaadayaa in arrintaas aysan markale dhicin, mana qaadan doono in ay arrintaasi dhacdo”.
Dowladda iyo Ahlusunna oo heshiis KMG ah ku kala saxiixday Guriceel “Akhriso+Dhageyso Qodobada”
Dowladda iyo Ahlusunna oo heshiis KMG ah ku kala saxiixday Guriceel "Akhriso+Dhageyso Qodobada"